Diyaaradaha Yahuudda Oo Duqeymo Ka Geystay Jiidda Gaza. – Calamada.com
Diyaaradaha Yahuudda Oo Duqeymo Ka Geystay Jiidda Gaza.
calamada July 2, 2016 2 min read
Diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda ayaa Waabarigii hore ee Saakay sil-silado weerarro ah ka fuliyay deegaanno kala duwan oo ka tirsan Jiidda Gaza ee Dhulka Filastiin, inkastoo illaa iyo hadda aan lasoo sheegin wax khasaare nafeed ah oo ay duqeymahaasi sababeen.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee Yahuuddu ay weerarro ku qaadeen Saldhigyo ay lahaayeen dagaal-yahannada Muqaawamada Filastiiniyyiinta iyo Xarumo lagu farsameeyo Hubka Mac-malka ah, waxayna dhaliyeen bur bur xooggan oo soo gaaray dhismayaashii la duqeeyay.
Diyaaradaha Gumeysiga Sahyuuniyaddu waxay sidoo kale beegsadeen Xarun Meliteri oo ay lahaayeen Guutada Cizzu-diin Al-Qassaam ee garabka Meliteri ee Ururka Xamaas oo ku taalla Waqooyiga Jiidda Gaza ee dhulka Filastiin.
Weerar kale oo ay fulisay diyaarad nooca duuliye laâ€™aanta ah oo Yahuuddu leeyihiin ayaa waxaa lagu qaaday Warshad ku taalla Xaafadda Az-Zeytuun ee bariga magaalada Gaza.Â Warbaahinta Yahuddu waxay ku warrameen in duqeymahani xagga cirka ah inay jawaab u ahaayeen gantaalo laga soo tuuray dhinaca Gaza oo gelinkii dambe ee maalintii shalay ee Jimcihii kusoo dhacay deegaanka Yahuudda xoogga lagu dejiyay ee Sadayruut.
Dhinaca kalena Tobnaan kun oo Muslimiin ah ayaa maalintii shalay oo Jimce ah waxay ku tukadeen Masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, iyadoona dadweynaha Filastiiniyiintu ee Masjidkaas ku tukaday ay isaga kala yimaadeen deegaannada kala duwan ee Daanta galbeed iyo magaalada Al-Qudus.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa Masjidka Al-Aqsa ka dhacayay iska hor imaadyo u dhaxeeya Ciidamada Booliiska Yahuudda iyo Muslimiinta Filasiiniyiinta oo Kooxaha Sahyuuniyadda ka hortaagnaa inay Masjidkaas soo iqtixaamaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 27-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 28-09-1437 Hijri.